Ividiyo: Gcina, Win, Khula nge-Right On Interactive | Martech Zone
Ividiyo: Gcina, Win, Khula nge-Right On Interactive
NgoLwesihlanu, Agasti 2, 2013 NgoLwesine, July 10, 2014 Douglas Karr
Olunye ukhiye esiwukhombe ebhizinisini lethu ukuthi uhlobo oluthile lwekhasimende lungukhiye empumelelweni yeklayenti kanye nakwethu. Okunye kuhlobene nezinsizakusebenza, okunye okuhambisana nomkhakha abakuwo futhi iningi lawo kungukubongwa kwenani nokubuyiselwa kutshalomali. Sineminyaka emihlanu nje kuphela futhi isilingo eminyakeni embalwa yokuqala bekuwukuthatha noma yiliphi iklayenti elingasayina isheke. Asisakwenzi lokho… sesinakekele kakhulu ukuthi ngubani osiqashayo.
Ngezinga elikhudlwana, ngikholwa ukuthi lokhu kuyisihluthulelo sempumelelo yazo zonke izinkampani. Izinkampani eziningi kakhulu zivele zifune ukuthola noma ngubani esivumelwaneni, bese zihlushwa izinkinga zokuxhaswa, inzuzo yamakhasimende, izingxabano zokukhokhisa nezinsizakalo, nokungahambisani kahle nokulindelwe.
Ngakwesokudla ku-Interactive ungumxhasi futhi singabangani abakhulu nenkampani. Lapho amabhizinisi efuna uhlelo lokuzenzekelayo lokumaketha, ukunakwa okuningi kufakwa kumikhombandlela emisha, imingcele kanye nokuguqulwa. Amaphuzu kuyasetshenziswa, kuhlinzekelwa kuqala kokunye okuqinile noma isimilo esigxile kubabhalisile… kepha kukhona igebe elikhulu ekuhlakanipheni kwabo.
Leso sikhala siwukuthi iningi lezinhlelo ezishintshayo zithola abantu abangahle bakulungele ukusayina… kepha empeleni abaziqhathanisi nokuziphatha nezimpawu zekhasimende lakho lamanje. Futhi abanaki ukuziphatha nokuziphatha kwamakhasimende akho amanje. Sonke siyazi ukuthi kubiza kakhulu ukugcina ikhasimende lamanje kunokuthola nokungena ebhodini elisha.
Ukumaketha akumayelana nenani lezivakashi, ukuhola noma ukuguqulwa onakho. Ukumaketha okuhle kumayelana nokuqonda ukuthi angobani amakhasimende akho, ukuthola okuningi okufana nawo, ukuwagcina ejabule, nokukhulisa ubudlelwano nawo. I-Right On Interactive isho kahle… Win, Gcina, Khula.
Landa i-Right On Interactive's eBook, Kuyini ukumaketha kwe-Lifecycle manje!
Tags: 3d amagoliezishintshayoukugcinwa kwamakhasimendeUkumaketha kwe-Lifecycleukugcinwangqo ekuhlanganyeleniamagoli
Ucwaningo Lomphakathi Nemali Engenayo
Lokho okuthandwa yi-Facebook kuveza ngathi
Aug 2, 2013 ku-10: 44 AM
Ngiyabonga uDouglas, kuzofanele ngikuhlole lokhu.